Hyatt dia manatsara ny portfolio-ny fialam-boly miaraka amin'ny fahazoana Apple Leisure Group
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Hyatt dia manatsara ny portfolio-ny fialam-boly miaraka amin'ny fahazoana Apple Leisure Group
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Ny fanarenana matanjaka ny dia lafo vidy miaraka amin'ny fanitarana ara-jeografika ny portfolio'ny tsenan'i Hyatt dia manondro ny tombony ho an'ny orinasa amin'ny ho avy.
Hyatt dia manitatra ny fanolorana fialamboly lafo vidy.
Hyatt, dia mahazo 2.7 miliara dolara an'ny Apple Leisure Group.
Apple Leisure dia miasa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny miisa 100 fampiasa amin'ny marika marobe.
Ny vondrona hotely amerikana malaza, Hyatt, dia mividy mpandraharaha fampiantranoana, Apple Leisure Group, mitentina US $ 2.7 miliara, manitatra ny fanolorana fialan-tsasatra lafo vidy. Ny fanarenana matanjaka ny dia lafo vidy miaraka amin'ny fanitarana ara-jeografika ny portfolio'ny tsenan'i Hyatt dia manondro ny tombony ho an'ny orinasa amin'ny ho avy.
Apple Leisure Group dia miasa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny miharo volo rehetra manerana ny marika maro karazana, fa tsy voafetra ihany, Sunscape Resorts sy Spa miaraka amin'ny Secrets Resorts sy Spa. Ity fampitomboana ity dia hampitombo be ny portfolio-n'i Hyatt, izay efa mifantoka be amin'ity tsena ity.
Ny fanarenana ny dia lavitra dia toa mampanantena. Ny vinavinan'ny mpamakafaka indostrialy dia milaza fa ny alin'ny efitrano hipetrahana amin'ny trano fandraisam-bahiny lafo vidy (manerana ny tsena lehibe 60) dia hahatratra ny taona bebe kokoa amin'ny taona (YoY) fiakarana (69.7%) amin'ny 2021 noho ny tetibola (59%).
Ny fanarenana bebe kokoa ny sehatry ny haitraitra dia toa taratry ny fitomboan'ny fangatahana sy ny famatsiana ny fanomezana lafo vidy amin'ny 2021, ary marika mampanantena ho an'ny nanitatra Hyatt portfolio. Ny fampitomboana avo roa heny ny tolotra fampiantranoana an'i Hyatt dia hikorontana tsara miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana fialamboly lafo vidy mandritra ny vanim-potoana fanarenana COVID-19. Miaraka amin'ny fangatahana fivezivezena amin'ny raharaham-barotra napetraka hijanona ambany ho an'ny vinavina, ity fahazoana ity dia hamela an'i Hyatt hanamafy ny toerana misy azy eo amin'ny tsena antenaina ho sitrana haingana kokoa.
Ny valim-panadihadiana nataon'ny indostrialy farany teo dia nahitana fa 28% n'ireo mpamaly manerantany izao dia manana teti-bola ambony kokoa (16%) na somary avo kokoa (12%) ho an'ny fialantsasatra, mampiseho fa misy andiana mpanjifa mitady handany vola fanampiny amin'ny fialan-tsasatra manaraka.
Ho an'ny mpanjifa sasany, ny fanidiana ny firenena sy ny famerana ny dia iraisam-pirenena dia midika fotoana bebe kokoa ao an-trano. Io dia namela ny hanaovana tahiry ary nitombo ny tetibolan'ny dia ho an'ny sasany. Noho izany, ny mpandeha sasany dia vonona handoa vola bebe kokoa, mitady fialan-tsasatra mihaja, ary manamarika fotoana iray manokana amin'ny fialantsasatra manaraka.
Ny fironana amin'ny trano fandraisam-bahiny farany teo dia mampiseho ireo mpitrandraka trano fandraisam-bahiny hafa efa nanitatra ny portfolio-ny lafo vidy. Aogositra 2021 dia nahita ny InterContinental Hotel Group (IHG) nanambara ny fikasana hanangana marika fialan-tsasatra vaovao hampitombo ny fitomboany. Nanambara ihany koa i Marriott fa mikasa ny hampitombo ny tolotra fampiantranoana rehetra.
Apple Leisure Group dia iray amin'ireo mpandraharaha fitsangatsanganana lehibe indrindra amin'ny fialantsasatra fonosana any Etazonia, Meksika ary Karaiba. Ity fifanarahana ity dia hampitombo ny portfolio'ny Hyatt an'ny Eropa amin'ny 60%, hampitombo ny fifaninanana amin'ireo toa an'i Marriott, Hilton ary IHG.